निर्दोष सर्वसाधारणमाथि कुटपिट गर्ने प्रहरीलाई कारबाही गरिने – नेपाली समाचारको स्रोत – bhandaforaviyan.com
| प्रकासित मिति : ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
निर्दोष सर्वसाधारणमाथि जबरजस्ती बल प्रयोग गर्ने र अमानवीय व्यवहार देखाउने प्रहरीलाई कारबाही गरिने भएको छ। बिनाकारण प्रहरीले सर्वसाधारणमाथि हातपात गरेपछि प्रहरीको सर्वत्र आलोचना हुन थालेसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारबाही गर्ने तयारी गरेको हो।
हातपात गर्ने प्रहरी र कमान्डलाई कारबाही गर्नका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एसएसपी किरण बज्राचार्यको संयोजकत्वमा छानबिन टोली गठन भएको छ। टोलीले एक साताभित्र छानबिन प्रतिवेदन तयार पारी कारबाहीका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्नेछ। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुवेर कडायतले सम्बन्धित प्रहरी र ड्युटीका खटिएका इन्चार्जलाई कारबाही हुने बताए। उनले भने, ‘गल्तीका आधारमा सबैलाई कारबाही हुन्छ, पछिल्लो समय केही प्रहरीले अशोभनीय व्यवहार देखाएकोप्रति हामी गम्भीर छौं, गल्ती गर्नेलाई कारबाही निश्चित छ।’ काठमाडौंको माइतीघर मण्डला र नयाँ वानेश्वरमा शुक्रबार प्र्रहरीले सर्वसाधारणमाथि ज्यादतीपूर्ण व्यवहार देखाएको थियो। विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको समर्थन र संविधान कार्यान्वयनको विषयमा बोल्दा प्रहरीले लखेटीलखेटी कुटपिट गरेको थियो।
प्रहरीको कुटपिटपछि मनीष श्रेष्ठ र वसन्त पौडेल घाइते भएका थिए। श्रेष्ठ कुलमानलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउन भन्दै समर्थन गर्न माइतीघर पुगेका थिए। उनलाई प्रहरीले बिजुली बजारसम्म लखेटेको थियो। प्रहरीको बुट र लाठीले घाइते भएका उनी ट्रमा सेन्टरमा उपचार गरी घर फर्केका छन्। सामान्य तरिकाले समर्थन गर्दा प्रहरीले क्रूर व्यवहार देखाएको श्रेष्ठले सुनाए। उनले भने, ‘हामीले त्यस्तो चर्काचर्की गरेकै थिएनौं, राम्रो व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ भन्दा प्रहरीले नराम्रोसँग कुट्यो।’ उनको अवस्था सामान्य रहेको छ।
महामारीको बेला सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेपछि सर्वसाधारण रोटीरोटीका लागि सडकमा निस्किएका छन्। तर, सामान्य विचार राख्दा र राम्रोको समर्थन गर्दा पनि प्रहरीले ज्यादतीपूर्ण व्यवहार देखाएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरी प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ।
संविधान दिवस र कार्यान्वयनबारे आफ्ना भनाइ राख्दै गरेका वसन्त पौडेलमाथि पनि प्रहरीले निर्घात कुटपिट गरेको थियो। वरिपरि भिडभाड नभए पनि प्रहरीले संविधानको विषयमा बोलेको भन्दै लखेटीलखेटी कुटपिट गरेको थियो। त्यहाँ प्रहरीले सञ्चारकर्मीलाई समेत धम्क्याएको थियो। त्यस्तै, बिहीबार बानेश्वर प्रहरी वृत्तका इन्स्पेक्टर केशर न्यौपाने नेतृत्वको टोलीले बबरमहलमा हन्डे«ड ग्रुपका अभियन्ता बब्लु गुप्तालाई निर्घात कुटेको थियो।
प्रहरीको व्यवहारप्रति मानव अधिकार आयोगले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। आयोगले गल्ती गर्ने प्रहरीमाथि कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरे पनि गल्ती गर्नेमाथि कारबाही नभएको आयोगको भनाइ छ। आयोगका सहसचिव टिकाराम पोखरेलले मानव अधिकार हननका घटना बढे पनि सम्बन्धित निकायले कारबाही र अधिकार दिलाउने काम नगरेको बताए। आयोगले कारबाही गर भनेर सिफारिस गरे पनि कैयौं मुद्दामा सम्बन्धित निकायले कारबाही नगरेको उनको भनाइ छ।
सडकमा डिँहिरहेका सर्वसाधारणमाथि प्रहरीले कुटपिट गरेपछि प्रहरीको आलोचना भइरहेको छ। महामारीको बेला सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेपछि सर्वसाधारण रोटीरोटीका लागि सडकमा निस्किएका छन्। तर, सामान्य विचार राख्दा र राम्रोको समर्थन गर्दा पनि प्रहरीले ज्यादतीपूर्ण व्यवहार देखाएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रहरी प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले प्रहरी संयम र विवेकपूर्ण हुनुपर्ने बताए। उनले प्रहरीको सबैभन्दा राम्रो गुण धैर्य, अनुशासन र नागरिकप्रति नम्र व्यवहार रहेको बताए। तर, प्रहरीले नै क्रूर व्यवहार देखाउँदा आम सर्वसाधारणले सिंगो संगठनमाथि नै विश्वास गर्न नसक्ने वातावरण सृजना हुनसक्ने उनको भनाइ छ। ‘प्रहरी जनताको सुरक्षाको साथी हो, प्रहरीले कोही असुरक्षित छ भने जोगाउनुपर्छ तर आवेशमा आएर सामान्य विषयमा हातपात गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने। उनले पछिल्लो समय तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल उँचो राख्ने क्रियाकलाप कम भएकाले पनि प्रहरीमा निरुत्साह बढेको बताए। तल्लो दर्जाका र बढी खटिने प्रहरीलाई संयम र जिम्मेवार बनाउन सेवासुविधा र तालिममा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी सोमेन्द्रसिंह राठौरले प्रहरीले तितरबितर पार्ने क्रममा केही व्यक्ति घाइते भएको बताए। उनले प्रहरीले कुटपिट गरेको विषयमा जानकारी नै नभएको दाबी गरे। ‘प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको छ, अटेर गर्नेलाई तितरबितर पारेको छ, कुटपीटचाहिँ गरेको छैन, माइतीघरबाहेक अरू ठाउँमा भेला हुन नदिन प्रहरीलाई माथिल्लो निकायले खबर गरेको छ, त्यसले कडाइ गरिएको हो,’ उनले भने।
पेसाप्रति निरुत्साह र इन्चार्जको कमजोरी
लामो समय कामका खटिने प्रहरीलाई सरकारले दिने सेवासुविधा भने निम्छरो छ। कम तलबमा धेरैे समय काम गर्नुपर्दा प्रहरीमा ऊर्जा कम देखिएको छ। पेसाप्रति चित्त नबुझेपछि कतिपय प्रहरीले फिल्डमा रिस पोख्ने गरेको सुरक्षा जानकारहरू बताउँछन्। पूर्व डिआइजी मल्लले तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल उँचो नबनाएसम्म सिंगो संगठन व्यवस्थित नहुने बताए। उनका अनुसार नेपाल प्रहरी थोरै सेवासुविधामा लामो समय खट्दै आएको छ। प्रहरीले यस्तो व्यवहार देखाउनुको कारण भने एउटा मात्र छैन। तालिमको कमी, ओभर लोड, थकान, कोभिडको त्रास तथा निरुत्साह, इन्चार्जको व्यवहार सही नहुनु, व्यक्तिगत समस्या, इन्चार्जको दबाबलगायत कारणले प्रहरीले यस्तो व्यवहार देखाउँछ। पूर्वडिआइजी मल्लले पछिल्लो समय कमान्डरमा पनि क्षमताको अभाव देखिएको बताए। पहिलेपहिले नेपाल बन्द वा अन्य कुनै विरोध कार्यक्रम हुँदा प्रहरी कमान्डरले राम्ररी सिकाउने भए पनि अहिलेका कमान्डरले भने सिकाउने कुरामा चासो नदिएको उनको भनाइ छ। नागरिक दैनिकबाट
पेट्रोलको ट्यांकर नदिमा,आगो बलिरहेकाले उद्दारमा कठिनाई
आभास रानाको लघुचलचित्र ‘घटनास्थल’ सार्वजनिक ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
सिकाइमा अनलाइन प्रभावकारी ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
नाम मात्रका कोभिड अस्पताल, उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँदै संक्रमित ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
करका अधिकांश प्रक्रिया अनलाइनमै ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
बूढीगण्डकी आयोजना : सरकारै पिच्छे फरक निर्णय, भट्टराईको आरोपले थप शंका ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
कठिन बन्दै भान्सा : अत्यधिक महँगी बढ्यो ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
कर्णालीमा ‘अविश्वास’ : बाग्मती र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर तयारी अवस्थामा ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
सेभ द माइन्डद्वारा सिद्धि छात्रावासमा खाद्यान्न सहयोग। ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
भारतीय खसीबोका भित्रिँदा नेपाली किसान मारमा। ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
मलेसियामा अपहरण, नेपालमा बार्गेनिङ ! ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
“श्रदान्जली” म्युजिक भिडियो सार्वजनिक ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०
डा. केसीसँग वार्ता गर्न ७२ घण्टे अल्टिमेटम ४ आश्विन २०७७, आईतवार ०३:१०